पैसाको लेनदेन गरेपछि किन साबुनपानीले हात धुने ? - WASHKhabar
पैसाको लेनदेन गरेपछि किन साबुनपानीले हात धुने ?
२५ बैशाख २०७७, बिहीबार १५:५६ 315 पटक हेरिएको
काठमाडौ : कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको डरले मानिसका व्यवहारहरु बदलिएका छन् । डेढ महिनादेखि घरभित्रै बस्नुपरेको छ । घरबाट बाहिर निस्कँदा अर्को मान्छे देख्नसाथ छेउ लाग्ने बानी परेको छ ।
घरमा केही सामान सकियो भन्ने किन्न जाँदा पसलमा, किनिएका सामानमा वा पैसामा बसेर भाइरस आउँछ कि भन्ने डर धेरैमा हुन्छ । यही डरका कारण हिँडडुल, किनमेल तथा अरु काममा मानिसका व्यवहार बदलिएका हुन् । कसैले बुझेरै सावधानी अपनाइरहेका छन् भने कतिपयले अन्योलकाबीच अनावश्यक व्यवहार पनि देखाएको पाइन्छ । कोरोना भाइरस नयाँ भएकोले यसको बारेमा धेरै कुरा थाहा पाउनै बाँकी छ । के-के बाट सर्छ, भाइरस कहाँ-कहाँ बस्छ, कस्ता मान्छेलाई छिटो सङ्क्रमण गर्छ जस्ता प्रश्नहरुको सही जवाफ पत्ता लागिसकेको छैन ।
सामान किन्न जाँदा पसलमा भिडभाड नगर्ने वा हरेक मानिससँग कम्तीमा ६ फिट टाढा बसेर किनमेल गर्ने र सामान लिएर फर्केपछि साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुने, तरकारी लगायतका वस्तु केलाउनु वा पकाउनु अघि र खाना खानुअघि पनि साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुनुपर्ने डाक्टर बाँस्तोलाको सुझाव छ ।
अध्ययन, अनुसन्धानहरु भइरहेका छन् । अहिलेसम्म गरिएको अनुसन्धान तथा भएका तथ्याङ्कले जे देखाउँछ, त्यसैको आधारमा आफ्नो व्यवहार बदल्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
यसरी सतहमा पनि लामो समय बाँच्ने भएकोले कुनै पनि वस्तुमा भाइरस आउँछ कि भन्ने डर लाग्नु स्वभाविक भएको डाक्टर बाँस्तोला बताउनुहुन्छ । त्यसैले सामान किन्न जाँदा पसलमा भिडभाड नगर्ने वा हरेक मानिससँग कम्तीमा ६ फिट टाढा बसेर किनमेल गर्ने र सामान लिएर फर्केपछि साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुने, तरकारी लगायतका वस्तु केलाउनु वा पकाउनु अघि र खाना खानुअघि पनि साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुनुपर्ने डाक्टर बाँस्तोलाको सुझाव छ ।
उज्यालो अनलाइनबाट साभार गरिएको ।